Global Voices teny Malagasy » Malawi: Fanatanjahan-tena sy Kamkwanba, ilay tovolahy namokatra angovo avy amin’ny rivotra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Oktobra 2009 21:06 GMT 1	 · Mpanoratra Victor Kaonga Nandika Lila
Sokajy: Malawi, Fampandrosoana, Tanora, Teknolojia, Tontolo_iainana
Na dia mangina aza ny tontolon'ny bilaogy amin'ny ankapobeny dia nisy zava-niseho maro tany Malawi tato anatin'ny herinandro vitsivitsy izay.
Vao tamin'ny faran'ny herinandro teo dia nanao ady sahala tamin'ny Elefantan'i Côte d'Ivoire i Malawi ary anisan'ny mpilalao tamin'izany i Didier Drogba, mpilalao avy any Chelsea. Tao amin'ny kianjan'ny Kamuzu no natao ny lalao. Buckaro Thandi  no nanoratra mikasika ny ady mafy natrehan'i Malawi nanoloana ny Elefanta:
Hoy izy nanoratra fohy:
Arahabaina fa nanao ady sahala tamin'i Cote d'Ivoire. Tena nahafinaritra. Horakoraka be!
Any amin'ny lahatsoratra nataony taloha no nilazany ny alahelony noho ny tsy fahampian'ny herinaratra vokarin'ny ESCOM any Malawi. Tsy nino izy hoe 2% ny mponina any an-toerana ihany no mahazo herinaratra (ny tena marina dia 8%). Noho izany dia nahafinaritra azy ny tantaran'ilay tovolahy antsoina hoe William Kamwamba, 21 taona, izay efa ho 7 taona izao no nanamboatra milina famokarana angovo avy amin'ny rivotra ary vao nivoaka boky vao haingana.
Ny lohatenin'ny boky dia hoe “Ilay tovolahy nitrandraka rivotra  “
Ahafahana mamokatra herinaratra hampirehetana takamoa maromaro sy hihainoana vata fandraisam-peo any an-tokantrano ity milina ity. Lasa fanta-daza i William tato anatin'ny 3 taona izay raha narahan'ny mpanao gazetin'ny Daily Times ny tantarany tany Kasungu tokony ho 150 km miala ny renivohitra Malawi. Ankehitriny ilay mpianatra ao amin'ny anjerimanontolon'ny Africa Leadership Academy, hireharehan'i Malawi tokoa i William ary lasa olo-malaza atao loohatenin-gazety sy firesaka ao amin'ny aterineto.
Ndagha  no mitantara ny fifandraisany manokana amin'ity tovolahy:
Rehefa mifandray aminy, dia mahatsapa ny fitiavany hampivoatra ny lafiny elektronika any Malawi sy ny any ivelany aza. Mpirona kokoa any amin'ireo sahirana izy satria ny tantarany manokana dia mitovy amin'ny fanamby atrehin'ny fianakaviany sy ireo teratany Malawita maro hafa koa. Tovolahy tapa-kevitra amin'ny fanovana tiany hatao izy. Heveriko fa arakaraky ny maha eo azy dia mitombo hatrany ny hetezerany manoloana ny lafiny angovo any Malawi. Rehefa tonga ny fotoana mahamety azy, dia azoko antoka fa mbola hahavita zavatra goavana izy.
Noho izany na dia mangina aza ny tontolon'ny bilaogy dia misy ihany ny zavatra miseho sady resahan'izao tontolo izao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/10/20/3847/
 Buckaro Thandi: http://buckaroothandi.blogspot.com/2009/10/setting-record-straight.html
 Ilay tovolahy nitrandraka rivotra: http://williamkamkwamba.typepad.com/